Waqti loo qabtay xilliga ay Ciidamada AMISOM ka baxayaan Soomaaliya - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Waqti loo qabtay xilliga ay Ciidamada AMISOM ka baxayaan Soomaaliya - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waqti loo qabtay xilliga ay Ciidamada AMISOM ka baxayaan Soomaaliya
Midowga Afrika ayaa shaaciyay in howlgalka raacsan ee ciidamadooda Soomaaliya ku sugan (AMISOM) la soo afjari doono bisha Oktoobar ee Sanadka 2018.
Sida uu sheegay Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika xilliga u haray AMISOM oo ah 2 sano ayaa ciidamo la dhisayaa ciidamada Soomaaliya oo la wareegi doona ammaanka goobaha ay AMISOM gacanta ku heyso.
Dib u eegis lagu sameeyay howlgalka AMISOM ayaa la qorsheeyay in qorshe Soomaaliya looga saarayo ciidamada AMISOM iyadoo qorshahaasina lagu asixiyay kulankii 608-aad ee dhowaan ka dhacay Magaalada Addis Ababa.
Warbixinta Golaja Ammaanka Midowga Afrika ayaa sheegeysa in la fulinayo qorshaha CONOPS oo ah xoojinta iyo dardar gelinta howlgallada Ciidamada AMISOM iyo dowladda Soomaaliya, waxaana la soo afjarayaa howshii AMISOM ee Soomaaliya oo bilaabatay 2007.
Previous articleIsrael to assist Kenya in the construction of a border security wall with Somalia
Next articleAxmed Madoobe: “Doorasho ayaanu ku mashquulnay, Amnigiina faraha ayuu ka baxayaa…”